RASMI: Arsenal oo xaqiijisay hadii uu Mkhitaryan ka qeyb galayo finalka Europa League – Gool FM
(London) 21 Maajo 2019. Kooxda reer London ee Arsenal ayaa si rasmi ah ugu shaacisay website-keeda in laacibkeeda Henrikh Mkhitaryan uu seegi doono finalka UEFA Europa League.
Sida lagu sheegay warkan rasmiga ah ee kasoo baxay kooxda Arsenal, laacibka reer Armenia ayaan ka mid noqon doonin ciyaartoyda Gunners ee u safri doonta magaalada Baku ee dalka Azerbaijan, si ay kaga qeyb galaan finalka Europa League ay kula ciyaari doonaan kooxda Chelsea, sababo la xiriira dhinaca ammaanka.
30 jirkan ayaa ku qasbanaan doona inuu ka maqnaado kulanka finalka UEFA Europa League ay wada ciyaari doonaan kooxaha reer London, sababa la xiriira xiisad siyaasadeed ee ka dhaxeeysa labada dal ee Azerbaijan iyo Armenia.
Laacibka Arsenal ahna Kabtanka xulka Armenia ee Henrikh Mkhitaryan ayaa horraantii xilli ciyaareedkan kulan ay Arsenal kula soo ciyaartay Baku kooxda Qarabag waxaa xiddigan loo diiday in la siiyo visa-ha Azerbaijan, maadaama dalkaasi iyo dalka uu ka dhashay Mkhitaryan ee Armenia ay dhex martay colaad heshiis laga gaaray 1994-kii, taasoo ku aaddan gobolka Nagorno Karabakh.
Sidoo kale laacibka reer Armenia ee Henrikh Mkhitaryan ayaa seegay kulan lagu ciyaaray isla magaaladan Baku ee dalka Azerbaijan, markii uu u ciyaarayay kooxda reer Germany ee Borussia Dortmund.